Salaamanews » Xubno Al-shabaab ka tirsan oo ismiidaamin fulin rabay oo lagu qabtay Kismaayo
Home » Warar Xubno Al-shabaab ka tirsan oo ismiidaamin fulin rabay oo lagu qabtay Kismaayo Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 2nd, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaWadaad masiixi ah oo lagu gawracay dagaallo ka dhacay TansaaniyaHogaamiye ka tirsan Al-shabaab oo lagu soo bandhigay GarooweXukuumadda Soomaaliya oo si kulul u cambaareysay qaraxii ka dhacay GaalkacyoRag ka tirsan al-Shabaab oo lagu qabtay Ethiopia
Ciidamada uu hogaamiyo horjoogaha ururka Raaskambooni, Axmed Maxamed Islaam, ayaa gacanta ku soo dhigay 12-ruux oo dhallinyaro ah iyo hubkii ay wateen kadib howlgallo habeenkii xalay ahaa ay ciidamadu ka sameeyeen xaafadaha Kismaayo.
Baaritaanka oo xoogiisu uu ka dhacay xaafadaha Farjano iyo Dalcada ayaa waxaa siyaabooyin kala duwan loogu soo qabtay dhallinyaro, kuwaasoo qaarkood la sii daayay markii ay ciidanku ku waayeen wax dambi ah. Dhallinyara oo xalay ku hoyday saldhiga baliiska magaalada Kismaayo, ayaa la sheegay in dhawaan lagu wareejin doono maxkamadda ciidamada magaalada, si ay xukunno kala duwan ugu rido ragaasi.
Taliyaha ammaanka magaalada Kismaayo Col. Axmed Diini oo Saxaafada kula hadlay magaalada Kismaayo, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in raggaan ay qaarkood ku cadahay inay ka tirsan yihii xoogaga Al-Shabaab yihiin.
“Waxaan ku soo qab qabanay iyagoo sita walxaha qarxa, waxayna sameynayeen qorshe ay ku fulin rabeen weerar ismiidaamin ahaa, oo ay la damacsanaayeen taliska Kismaayo, marka waaba iska cadahay sababta ay noo soo weerari rabee” ayuu yiri Mr. Diini.
Col. Axmed Diini ayaa wuxuu tilmaamay in baaritaanada ay ku wadaan raggaasi, ay ku ogaanayaan haddii ay jiraan rag kale oo Al-Shabaab ka tirsan, oo ay ogsoon yihiin inay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo.
Mr. Diini ayaa wuxuu ugu dambeyn sheegay in hawl galada ay ka wadaan Magaalada Kismaayo ay sii socon doonaan, islamarkaana ay geli doonaan goob walba oo ay ku tuhmayaan kooxda Al Shabaab.
Tags: warar « Qoraalkii HoreSomaliland oo ka hadashay shilkii ugu xumaa oo ka dhacay Hargeisa	Qoraalka Xiga »AHSWJ oo qaadacday maamul u sameynta gobollada Jubooyinka iyo Gedo	Halkan Hoose ku Jawaab